Afrika oo loogu deeqay Lacag loogu tala galay in loo isticmaalo talaalka Caronavirus | Allbanaadir.com
Home NEWS Afrika oo loogu deeqay Lacag loogu tala galay in loo isticmaalo talaalka...
Afrika oo loogu deeqay Lacag loogu tala galay in loo isticmaalo talaalka Caronavirus
Qaarada Afrika ayaa dhibaato badan xiligan kala kulmaysa caabuqa Caronavirus ee kusii faafaya daafaha dunida, waxaana aad looga digayaa in cudurkan si weyn ugu faafo Afrika dhibaato xoogana ku reebo.
Shirkadda dhinaca warbaahinta bulshada ee TikTok iyo hay’adda Gates Foundation ayaa qaarada Afrika ugu deeqay lacg gaareysa 20-Milyan dollar oo loogu tala galay in wax loogu qabto cudurka Caronavirus.
Lacagtan malaayiinka Dollar ah ayaa Tiktok iyo Hay’adda Gates Foundation sheegeen in ay ku wareejinayaan shirkadda GAVI ee ka shaqeysa dhinaca tallaalka, si ay uga caawiyaan Afrika in tallaalka COVID-19 uu gaaro.
Shirkada GAVI ee lacagta lagu wareejinayo ayaa sheegtay in lacagtaasi ay u isticmaali doonaan sidii tallaalka loo gaarsiin lahaa Afrika, marka la xaqiijiyo in uu wax ka qabanayo COVID-19 islamarkaana la sharciyeeyo.
Shirkado waa weyn iyo Hay’addo badan ayaa dadaal badan ugu jira sidii loo heli lahaa talaal looga hortago cudurka safmarka ee Caronavirus, mana jiro ilaa hada talaal cudurkan looga hortago oo lasoo saaray.
Previous articleHormuud Foundation iyo Salaam Bank oo deeq gaarsiiyay isbitaalka Dhimirka Dr Xabeeb (Sawirro)
Next articleXaalado cusub oo cudurka Covid-19 oo maanta laga diiwaan galiyay Muqdisho